Fotoana tokony hanaovanao solomaso misy oram-panala - ULLER
Ny fitandremana ny fahitanao rehefa manao fanatanjahan-tena toy ny snowboarding na ski ianao dia tena zava-dehibe hanatratrarana ny tanjontsika. Ary ny fampiasana ny tsiroaroa tsara indrindra amin'ny Slim fitaratra (antsoina koa hoe sarontava na volomboky ny oram-panala) dia zava-dehibe toy ny mitafy ski na snowboard, na baoty ary akanjo mafana mety aminao. Ny habetsaky ny fahaizantsika amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny oram-panala dia miankina amin'ny halaviranay sy ny fahaizantsika mijery ary ny marina dia amin'ny tsara indrindra ihany solomaso blizzard ianao dia ho afaka hahatratra ny fahitana ilainao rehefa mampihatra fanatanjahantena mampientanentana amin'ny lanezy izahay.
Mahatsapa ve ianao fa vonona handresy ireo loza ateraky ny natiora any amin'ireo faritra misy lanezy? Aza mitsahatra mamaky ary tadiavo ireo fotoana 5 tena manandanja izay tsy isalasalanao fa hankasitrahanao ny maka ireo tsara indrindra miaraka aminao volomboky ny oram-panala!
IREO IZAO no fotoana manan-danja indrindra amin'ny fitafiana ireo bilaoginao!
1. REHEFA MITSITRAKA NY VONINAHITRA
Inona no atao hoe tadio?
Ny tafio-drivotra misy rivo-mahery dia fantatra amin'ny anarana hoe "tadio oram-baratra" na "oram-panala" izay mametra ny fahitantsika ambanin'ny metatra vitsivitsy miala. Ireo dia toe-javatra faran'izay mafy izay mitranga any amin'ny faritra misy lanezy, miaraka amina andian-doza mety hitranga noho ny fisian'ny rivotra mitsika amin'ny haingam-pandeha. (56km isan'ora eo) miaraka amin'ny mari-pana ambanin'ny zero degre centigrade.
Tahaka ny ahoana ny tadion-drivotra?
ny blizzards miavaka amin'ny "ambany" na "avo" izy ireo arakaraka ny toerana misy azy. Ireo dia fisehoan-javatra izay mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny atleta amin'ny lanezy raha tsy voaomana tsara sy voaro hiatrika azy ireo izy ireo.
Mampidi-doza ve ny mosary?
ny blizzards Mitranga amin'ny hafanam-po mahery vaika izay maharitra 3 ora farafahakeliny, izay ivoahan'ny ranomandry, sampana, havandra ary vato amin'ny lafiny rehetra. Io dia mametra fatratra ny fahitana sy ny fiarovana ny atleta, ary mety handratra mafy ny vatana, ny loha ary ny maso. Ity fotoana ity, rehefa mitranga ny oram-baratra, dia fanalahidy ho an'ireo tia fanatanjahantena tafahoatra, satria tsy maintsy miomana tsara izy ireo handray azy ireo, ara-tsaina sy ara-batana. Ho fanampin'izany, tena ilaina ny mitondra ireo fitaovana ilaina raha toa ka te-hiaritra tafio-drivotra isika rehefa manao fanatanjahan-tena ao anaty lanezy. Aza adino ny miomana tsara amin'ity fotoana ity amin'ny fitaovanao ilaina ary tadidio foana ny mitafy tsara ny solomaso tadiavinao hamafiso ny fahitanao ao anatin'izany toe-javatra izany. Raha sendra tadio ianao, mitadiava fialofana eo akaiky eo raha azo atao, na dia miverina miverina hatrany amin'ny base aza ny tolo-kevitra na farafaharatsiny mampihena ny haavon'ny toerana avo araka izay tratra.
2. Mandritra ny ora fijanonana
Inona no atahorana ny masoandro amin'ny ora tampony?
Aza adino velively fa ny tara-pahazavana amin'ny masoandro dia nohatsaraina amin'ny fotoana tampony (manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 15 hariva), indrindra raha hita taratra amin'ny lanezy fotsy ny masoandro. Rehefa mitranga izany dia mitombo ny loza ateraky ny fahasimban'ny hoditra sy ny maso ary ny sunamasoandro. Mandritra ny ora faratampony, mitombo ny vokatra manimba an'ny taratra ultraviolet, satria mitombo ny vokany amin'ny tontolon'ny tany. Ataovy ao an-tsaina fa amin'ny fahavaratra, ny 9:00 maraina dia heverina ho ora be koa izay manimba ny fahasalaman'ny maso sy ny fahitana azy.
Rehefa manao ski sy oram-panala amin'ny fotoana tampony isika, indrindra amin'ny mitataovovonana, dia zava-dehibe ho an'ny atleta ny mitafy fonon-tanana hatrany amin'ny masony (fa tsy ambonin'ny lohany). solomaso blizzard na saron-tava ski kalitao. Izany dia mba hiatrehana ny famirapiratana be loatra toy izany any amin'ny faritra misy lanezy ary hiarovana ny maso amin'ny fahasimbana mivantana amin'ny taratry ny masoandro. Ataovy ao an-tsaina fa ny fahitantsika amin'ny hetsika ary rehefa manao fanatanjahan-tena isika dia tokony ho voaaro tsara hatrany ary tsy tokony holavina. Mety misy hazavana be loatra mety hisy fiantraikany amin'ny fahitana anao lavitra sy akaiky raha tsy manao solomaso misy oram-panala ianao, ary tsy ampirisihina hanimba ny fahazavan'ny fahitana.
Aza adino fa, na dia ny ora faratampon'ny andro aza no manimba indrindra ny fahasalaman'ny hoditra sy ny masontsika, dia tsy midika izany fa tsy mampidi-doza koa ny andro sisa, satria izy ireo. Ny taratra manomboka amin'ny masoandro dia misy hatrany, manomboka amin'ny mangiran-dratsy ka hatramin'ny hariva, na amin'ny andro rahona aza. Afaka mamakivaky ireo rahona ireo ny taratry ny masoandro! Azo antoka fa hankasitrahanao ny maka tsara volomboky ny oram-panalaamin'ny fotoana rehetra.
3. AO AMIN'NY Fifaninanana SPORTS
Iray amin'ireo fotoana tena ilaina indrindra ho an'ny atleta mahery indrindra ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Ny mangetaheta adrenalin'ireo atleta mifaninana amin'ny sokajy samihafa sy ny fanatanjahan-tena amin'ny lanezy dia saika tsy mety voky. Amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena dia tsy misy fisalasalana, fahatokisana, fahaizana, talenta ary toe-tsaina tia fifaninanana ihany, fa ilaina koa ny mitondra ireo fitaovana ilaina rehetra.
Amin'ny fotoanan'ny fifaninanana dia apetrany ny zava-drehetra, ary tsy maintsy ho ampy fitaovana sy vonona tsara amin'izany izy. Rehefa manao ski na oram-panala ianao dia tsy maintsy mifantoka tanteraka amin'ny fanatrarana ny tanjona sy ny fanodikodinana tsara ny fifantohanao, ka raha manana vitsivitsy ianao solomaso blizzard mitafy tsara izay mitandrina sy miaro ny fahitana anao rehefa mandray anjara amin'ny fifaninanana faran'izay mafy amin'ny lanezy ianao, azo antoka fa ho tonga ho azy ny ambiny.
4. RAHA MPANOMPO ANAO ianao
Tokony hanao solomaso misy lanezy ve aho raha vao manomboka?
Tokony hitondra solomaso misy lanezy na saron-dranomandry foana ianao, na iza na iza ianao vao manomboka na tena mahavaky fo amin'ny fanatanjahantena.
Raha mampahafantatra ny tenanao amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny oram-panala ianao dia azo antoka fa mianatra kely ny fomba mandeha amin'ny lanezy ianao, mitondra ski na snowboard eny an-tànanao rehefa miakatra ianao ... amin'izany dingana izany raha vao milatsaka ianao manainga.
Ary rehefa manomboka amin'ny fanatanjahan-tena mampihetsi-po sy fanatanjahan-tena amin'ny oram-panala isika dia manomboka amin'ny fihetsika ataon'ny manampahaizana efa an-taonany maro, amin'ny lafiny iray dia tsotra izany ary amin'ny lafiny iray hafa dia sarotra be, fa raha tena adventurer ianao dia tsy misy mahasakana anao rehefa mandeha. Saingy tsy vitan'ny hoe manakana na inona na inona ianao fa zava-dehibe fa ny zavatra rehetra ataonao dia manosika anao handeha lavitra. Ankehitriny ianao mijery fifaninanana, manatrika kilasy ary manao fanazaran-tena betsaka ho vonona amin'ny hetsika, saingy ho hitanao tsikelikely ny fomba nanapahanao fanapahan-kevitra kely ho lasa atleta lehibe azonao atao.
Hahafantatra tsikelikely ny fitaovana ilainao raisina, ny akanjo mafana, ny baoty, ny tabilao na ny ski, ny fiarovan-doha ary ny fiarovanao. saron-tava ski. Mitadiava ireo mety aminao ary mahatsapa iray miaraka amin'ny fanatanjahantena!
Ho hitanao ny maha-zava-dehibe ny fitondrana ireo fitaovana ilainao, indrindra ireo solomaso blizzard izay hiaro ny fahitanao sy ny tavanao raha misavoana amin'ny lanezy.
5. RAHA mila filamatra miavaka ianao, na lantovo mahitsy
Raha manana areti-maso toy ny presbyopia, hyperopia na astigmatisme ianao dia mila mividy sasany volomboky ny oram-panala izay mamela anao hifanaraka amin'ny solomaso roa sosona, amin'izay ny toe-pahasalamanao no tena mety indrindra rehefa manao ski na snowboard ianao. Tsy maintsy manana solomaso manokana namboarina miaraka amin'ny paozinao ianao, fa ho azy ireo kosa ny sarontava azonao solomaso ski an-tserasera azo ovaina.
Misy solomaso azo ovaina ve?
Ny fampiasana saron-tsarimihetsika azo ovaina dia misy ary manana tombony maro. Voalohany indrindra, manome antoka ny fahitana ampy izy ireo ary faharoa, mora izy ireo mampifanaraka na manampy clip optika misy lantom-pianarana nahazo diplaoma raha ilaina izany. Aza adino fa tsy tsara ny manao fanatanjahan-tena amin'ny solomaso mahazatra; Ireo dia tsy maintsy atao manokana sy mifanaraka amin'ny masonao.
Raha iray amin'ireo mijaly amin'ny toe-javatra hafa ianao toy ny fahatsapana sary, dia ilaina koa ny mitondra soa solomaso blizzard izay ahafahanao mifamadika amin'ny sokajy solomaso ampiasanao ao anaty solomasonao.
Tadidio fa ny toetrandro sy ny fahazavana any amin'ny faritra feno lanezy dia matanjaka be amin'ny mahazatra, ary afaka miovaova be isaky ny fotoana iray. Raha manana ianao Solomaso andriamby miaraka amin'ny lantira azo ovaina Ho mora kokoa aminao ny hampiasa ilay mety rehefa mila izany! Alao an-tsaina ange ny fahafahanao misintona sy mifanakalo ny anao volomboky ny oram-panala afaka segondra vitsy!
Araho ireto torohevitra ireto mba hisafidianana ireo solomaso tsara indrindra ho an'i VENTISCA!
Ahoana ny fomba hisafidianana ny solomaso ski tsara indrindra?
Tsy maintsy miaro UV-400 izy ireo miaraka amin'ny fiarovana 99% na 100% tsy an-kanavaka, raha tsy izany dia hanimba ny masonao amin'ny dingana ianao.
Vidio solomaso blizzard miaraka amina lantira maivana azo ovaina mba hahafahanao misafidy haingana ny sokajy fitaratra tena mety indrindra ho an'ny karazana toetrandro sy ny famirapiratana.
ny volomboky ny oram-panala ny safidinao dia tokony hanome anao mazava tsara optique, ary fahitana boribory sahaza mba hahalalana ireo faritra misy lanezy samy hafa rehefa manao ski na mitaingina ranomandry. Izany dia manome anao fomba fijery tsara momba ny tehezan-tendrombohitra sy ny tehezan-tendrombohitra, ary koa ny tsy fanodikodinam-bidy sy fahitana peripheral tena tsara.
Mifidiana solomaso ho an'ny tafio-drivotra zavona amin'ny andro misy oram-baratra, oram-baratra ary fahitana ambany. Solomaso ski sosona roa sosona misy firakotra manohitra zavona no tena atolotra indrindra. Manolotra rafi-drivotra anatiny izy ireo izay handevona ny hafanana ao anaty solomaso ski.
levitra solomaso blizzard maivana amin'ny kasety fanoherana slip-tsara mba hametahana tsara ny lohanao sy ny fiarovan-dohanao. Ny matevina no tsara kokoa!
Diniho tsara fa ny solomaso misy lanezy dia ekena amin'ny taona CE ary mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana ny Eoropeana.
Mifidiana ny saron-tava ski tsara indrindra Mora be ny manao azy! Ataovy ao an-tsaina fotsiny fa io no mpiara-dia aminao tsara indrindra hiarovana ny masonao amin'ny taratra sy ny hamirapiratra taratry ny lanezy sy ireo singa amin'ny ankapobeny: sampana, lanezy, bibikely ...
Ny fampiasana ny fitaovana mety rehefa manao ski na milomano dia ilaina mba hankafizanao sy hahatsapanao adrenalinina feno, ary ao anatin'izany, tsy isalasalana, ny tsara solomaso misy lanezy. Aza miandry intsony intsony!
Ilaina ny mitondra solomaso ski rehefa mampihatra an'io fanatanjahantena io amin'ny endriny rehetra isika. Efa fantatrao ve ny atao hoe ski modeities? Tohizo ny famakiana hahalalana ny fomba maodely tsara indrindra